Usayizi 26.7 MB
Play 7 024
Kubuyekeziwe on 24 / 02 / 2013: Version 2.2
Qedela sekulingisa we Piaggio PD-808 for FS2004 (Chofoza lapha Okwe FSX inguqulo). Kufaka nohlelo olunengqondo kanye nokuphathwa kwenjini okuthuthukile. Imodeli ifaka i-3D i-cockpit ebonakalayo nephaneli ye-2D. Imisindo mihle.
I model ongaphandle inawo wonke animations ezidingekayo nokuningi! ebusuku ukukhanyisa Full, yokwenza ezintathu, kuhlanganise nomagazini okhethekile we "Batman".
Ihluzo side, lokhu ibhanoyi senziwa kahle kakhulu, add-on ezingandile ukuthi kumelwe ifa.